-Google Chrome – 10/10
Lesi siphequluli nje isebenza ngingcono kakhulu ukwedlula abanye: Kuyinto ngokushesha futhi uzinze ngokwengeziwe.
Firefox (bheka eminye ngezansi mayelana addons) – 10/10
Firefox, kodwa lithi akufanele ibe populare njenge-Google Chrome, namanje King of ngokwezifiso. It is a yesibili close for me.
I sebenzisa KeePass ukugcina amaphasiwedi agciniwe yami, zombhalo, elondolozwe ngaphandle kwe-control 3rd party.
replacement esisemqoka eyinqolobane. Kuyinto freemium – though I don’t have a pressing need to use the Pro Edition, uma ngenza Bengingeke ukusifeza ngoba.
Yikuphi nje lapho obungafuna une umtapo wakho imidlalo?
Leli ithuluzi Windows ukusiza ikhophi serialise / move imisebenzi. Ngathuthela phezu kulona uma TeraCopy kwadingeka nezindaba ekhambisana nentando 64bit. It only loses points for having a cluttered UX
Ukuphelelwa yisikhathi Canary – 9/10
Lokhu Addon lihlale sakugcina ikutshela uma isitifiketi SSL site ubuka okwamanje ngokushesha uya ukuba yisikhathi. Uma kuyiwebsite yakho ine isitifiketi SSL, I batusa ukusebenzisa lolu Addon ukuze ugweme isitifiketi SSL site lakho ngokuphangalala ngenxa yokuntuleka okulula isaziso noma miscommunication.
Ukuze ukuthuthukiswa web zokucwaninga kanye namakhasi. Awesome ukuhlola izingcezu kancane kwekhodi kanye zokulungisa amaphutha Amakhasi.
Awesome upheqa emakhasini aqondene ngokusebenzisa proxy amaseva ethize. This is useful for when some sites are blocked or there is breakage for in a Transparent Proxy server. 🙂
I zisebenzise lokhu mzila ezinye traffic proxy amaseva ukuthi mina ngincamela asiphumelelanga imizila ezenzakalelayo. Libuye nezimo kakhulu. Uma une engaphezu kweyodwa weseva ayatholakala futhi lowo ovame ngokuzumayo uyaqhubeka blink, nje ukushintshela kwesinye. 🙂
Greasemonkey uyanezela Ukuzivumelanisa nezimo. There are many available scripts online to customise pages.
NoScript kuyinto AWESOME at Izikhangisi luvimbe. Its a kuyacasula kancane ekuqaleni njengoba kufanele ngokumhlophe wonke amasayithi oyithandayo – kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuwufanele kakhulu. 🙂
resurrect amakhasi – 10/10
Very ewusizo uma upheqa kwi-site futhi kwenzeka kube phansi. Uma indawo static okuqukethwe-ngamakhasimende ke lokhu kwenza kube lula ukuba ngokushesha ukuthola okuqukethwe uma yayo eligcinwe ngesinye isibukezo online.
Screengrab kuyinto elula skrini Addon lapho udla skrini salo lonke ikhasi lewebhu ubuka, ngisho noma kuba ezinkulu kubukhulu screen sakho. I ikakhulu ukuyisebenzisa ukuze mina akudingeki ukuba yezinhlelo skrini kamuva on.
Kukhona isihogo ukudabula ngaphandle lokhu plugin uma ufuna ukukhomba iseva. Ngangivame ukuba wenze lokhu sonke isikhathi.
Awesome ukuphathwa ithebhu uma une kuka-7-noma-kunjalo amathebhu.
Isiqophi DownloadHelper – 9/10
Isiqophi DownloadHelper ubheka yokuthuthela abezindaba – ikakhulukazi ngifuna noma yikuphi okuqukethwe enkulu ukuthi wenziwa ezilandiwe. Uma uchofoza isithonjana, kukhombisa ukuthi imifudlana njengamanje-ukulanda futhi kukunika inketho kulayini siwuphathe njengesigqila “evamile” thwebula.
Njengoba ngeke wazi uma FF is izosishayisa noma amandla uya ukusika, Ngingathanda bakhetha ugcine ikhophi ideskithophu yami futhi ngikwazi ke ukubuka ividiyo ngaphandle kokusebenzisa bandwidth more ukulanda ividiyo futhi. Futhi, emsebenzini, lapho abantu ningithumelele exhumanisa YouTube noma ezinye abezindaba, Ngijwayele ungakhathazeki ukubukela till kakhulu ngemva – lapho uziphumulele yami siqu noma ngesikhathi sekhefu.